डेंगु रोग Archives - Lokpati.com
Tag - डेंगु रोग
डेङ्गुबारे वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्– ‘भ्रममा नपरौं, यो महामारी होइन’
काठमाडौं, २ असोज । देशभर डेङ्गुको त्रास बढिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । डेङ्गु महामारी नभएको स्पष्ट पार्दै यसबारे भ्रममा नपर्न उनीहरुले आग्रह गरे । उनीहरुले...
काठमाडौं, ३० भदौ। डेंगु रोगबाट बच्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले देशभित्र फैलिँदो आवश्यक सूचना प्रवाहको उचित व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो रोगबाट...
डेंगुले दुईको मृत्यु, ५ सय बिरामी
सुरुङ्गा, ३० भदौ। झापामा डेंगु रोग अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। ३ महिना अगाडी देखा परेको डेंगु रोग जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापासहित स्थानीय नगपालिकालेसमेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा डेंगु रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको...
काठमाडौंमा डेंगु रोगको संक्रमणबाट दनुवारको मृत्यु
काठमाडौं, १९ भदौ। डेंगु रोगको संक्रमणबाट काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकस्थित इन्द्रावती गाउँपालिकाका ६५ वर्षे रामबहादुर दनुवारको बिहीबार बेलुका काठमाडौंस्थित भेनस अस्पतालमा मृत्यु भएको हो।
भक्तपुर पनि डेङ्गुकाे उच्च जाेखिममा, १२ जनामा देखियाे सङ्क्रमण
भक्तपुर, १५ भदाै । देशभरि फैलँदै गएको डेङ्गुको असरले भक्तपुर जिल्लालाई पनि उच्च जोखिममा पारेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत पार्थमणि न्यौपानेले गत वर्षभन्दा यस वर्ष चार दोब्बर डेङ्गुको बिरामी भेटिएकाले...
डेंगु राेगका लक्षण कस्ता हुन्छन्, कसरी बच्ने ?
काठमाडाैं। विगत केही समयदेखि यता देशका विभिन्न ठाउँमा डेंगुकाे संक्रमण फैलिरहेकाे छ। बेलैमा विचार नपुर्‍याउँदा र समयमै उपचार नपाउँदा कतिले त अकालमा नै ज्यान समेत गुमाएकाे छन्।
व्यक्ति तथा समुदायमा सचेतनाकाे अभावले गर्दा...
चितवन । चितवनमा डेँगुले महामारीको रुप लिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । डेंगु नियन्त्रणका लागि आजैबाट हरेक नागरिक चनाखो र सचेत नभए यो रोग नियन्त्रण बाहिर पुग्ने र त्यसले ठूलो क्षति गर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
के हो डेंगु रोग, कसरी बच्ने त ?
काठमाडौं, ४ भदौ ।काठमाडौं उपत्यकामा डेंगुका संक्रमित भेटिएका छन्।इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमूख डा. विवेककुमार लालका अनुसार ५५ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ।
उपत्यकाका १० वटा अस्पतालमा आएका मध्ये ५५...